Basket-ball : Tompondaka ho an’ireo sokajy zokiny -
AccueilSongandinaBasket-ball : Tompondaka ho an’ireo sokajy zokiny
Basket-ball : Tompondaka ho an’ireo sokajy zokiny
20/08/2018 admintriatra Songandina 0
Taorian’ny fifaninanana nandritra ny « Sômarôho » dia hampiantrano fifaninanana ara-panatanjahantena hafa indray ny tanànan’i Nosy Be Hell-ville. Nanomboka omaly ny fiadiana izay ho tompondakan’i Madagasikara eto amin’ny taranja Basket-Ball sokajy zokiny. Ao anatin’izany ihany koa anefa ny fifaninanana ho an’ny sokajy latsaky ny 14 taona. Nanomboka omaly dia toerana telo no mandray izany fifaninanana izany dia ny kianjan’ny Lycée Mixte, ny kianja mitafo ao Nosy Be, ary ny kianjan’ny Costolas. Lalao 24 no notanterahina omaly tamin’ireo kianja telo ireo, ary tao amin’ny kianja mitafo no nanaovana ny lanonam-panokafana.
Ireo ekipa mandray anjara
Latsaky ny 14 taona vehivavy : SEPA (Bongolava), BCNA (Analamanga), CRJS (Atsinanana), JCBA (Analamanga), MBALL (Analamanga), ASCUT (Atsinanana), N’JIT (Sava), SEPA ABM (Boeny), COSMOS (Diana), FANDREFIALA
Latsaky ny 14 taona lehilahy : JSB (Boeny), BCSM (Analamanga), JSB (Boeny), BCSM (Analamanga)
Zokiny vehivavy : VIBB’S (Vakinankaratra), FOBB (Analamanga), COMMUNE (Diana), ABBCM (Alaotra Mangoro), SCF FInance (Boeny), BCFA (Diana), ASCUT (Atsinanana), ASF (Analamanga), JCBA (Analamanga), ASJV (Vakinankaratra), RELAX (Diana), N’JIT (Sava), ASE (H/M), MMBC (Analamanga), ASE (H/M), MMBC (Analamanga), FRANCO-M (Diana), CCI (Amoron’Imania), CLUB Maman(Diana), DBC (Analamanga), BCV (Vakinankaratra), ABCM (Boeny), TAMIFA (Amoron’Imania), MILLE PATTES (Sofia)
Zokiny lehilahy : BBCM (Analamanga), BCO (Boeny), COUP DE POUCE (Boeny), BBC (Analamanga), LRBBA (Analamanga), JOS (Diana), USA (Diana), SBBC (Boeny), AT2B (Analamanga), CASINA (Atsinanana), COSPN (Diana), COMMUNE (Diana)
Ravalomanana sy Rajoelina : Misolelaka amin’ny Frantsay
Taorian’ny nahalanian’ny filoha frantsay vaovao omaly Emanuel Macron dia efa nipi- maso any sahady Ravalomanana Marc nandefa taratasy fiarahabana noho izao fandresena izao. Amin’ny maha filohana antoko azy moa no nandefasany io taratasy io, ary ...Tohiny
Rivo Rakotovao atsy Afrika Atsimo : Homena tombon-dahiny ny famokarana
Fitaterana an’habakabaka : Hiverina manomboka ny alahady izao ny zotra mankany Maroantsetra
Mamy Ravatomanga : Miresaka azy izao tontolo izao afa-tsy ny Bianco
Tsy fahampian-drano : HITA NY VAHAOLANA